O obi uto - ederede na ederede maka ibi akwukwo na agba
O obi uto - ndetu na ederede
O obi uto - ederede
Omenala ịkwọ abụ Krismas na-eme n'ụlọ na ezinụlọ na ụmụaka, ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara, adịghị eme agadi. Naanị banyere 18. Century na-abụ abụ na ezinụlọ na naanị kemgbe 19. Century maara otu egwu na Germany site na mba ndị ọzọ.
Mpempe akwụkwọ na ederede O ị na-enwe obi ụtọ
Ịbụ abụ na ịmekọ egwu ọnụ na gburugburu Christmas na-eme ka ikuku mara mma, nke pụrụ iche ma dị iche. Ọ bụghị naanị ụmụaka nke afọ ọ bụla na-enweta ya. Ugboro ugboro a na-emegharị abụ ma ọ bụ nụ n'oge a, ọ ka mma ederede ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ ngwá ọrụ, ịnwere ike ịkpọ egwu.
Site na ịpị na foto ahụ, akwụkwọ eji agba na ihe ederede na ederede carol Christmas malitere na pdf usoro
O obi uto, oh onye a gọziri agọzi,
oge Krismas amara!
Ụwa furu efu, amuwo Kraist.
Na-aṅụrị ọṅụ, ṅụrịa ọṅụ, O Krisendọm!
Kraist aputawo ka o gbaputa ayi:
Ndị agha nke eluigwe na-aṅụrị ọṅụ n'ịsọpụrụ.
Edee emeghe nke abụ Krismas O ị na-enwe obi ụtọ dịka faịlụ dị egwu
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyịma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndetu na egwu egwu nke akwụkwọ ntụrụndụ. Anyị nwere obi ụtọ ịtinye ihe ederede na ederede na nchịkọta ederede nke ụmụ egwu. Nhazi nke ihe ndetu nke nwere akwukwo ogugu ndi kwesiri ekwenye bu ihe siri ike, ma oburu na anyi choro igbalita ya.
Merry Christmas n'ebe nile - ederede na ederede
Niile akpa nwa m - ederede na ederede
Nnụnụ niile enweelarị - ederede na ederede
N'okpuru osisi Krismas ọkụ na-ere ọkụ - ndetu ...
N'osisi osisi a na - anọdụ ala - ederede na ederede
Ụmụnna m na - egwu egwu - ihe na ederede
The cuckoo na ịnyịnya ibu - ederede na ederede
Ọnwa ebiliwo - ihe odide na ederede
Obere nwoke na - eguzo n'osisi - ederede na ederede
Nnụnụ chọrọ ime agbamakwụkwọ - ihe odide na ederede
Fox, ị zuuru goose - ndetu na ederede